Yusuf Garaad: Soomaaliya Vs Kenya
Xubnaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda
In Soomaaliya ay soo gudbiso dacwad dhammaystiran oo wadata dokumenti markhaati ah oo muujinaya in badda lagu muransan yahay ay Soomaaliya leedahay - 13ka July 2015. Kiiska oo dhammaystiran.
Aad iyo aad ayay u sarreysaa. Marka la eego go'aammadii hadda ka hor laga gaaray kiisaska noocaan ah iyo weliba caddeeymaha farsamo iyo kuwa qaanuun ee la hayo, aad iyo aad ayaan ugu rajo weyn nahay in aan ku guuleysanno dacwaddan.
Dadka af Ingiriiska akhriyaa waxay kala socon karaan barta internetka Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda.
F. G. Waxaan u fasaxayaa Baraha Internetka ee doonaya in ay sii daabacaan qoraanlkan, haddii aanay waxba ka beddelin.